Published Wed Nov 20 2019 15:00:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Opposition party suppoters sing and dance while waiting to hear a speech by the country's top opposition leader in Harare, Wednesday, Nov. 20, 2019. Zimbabwean police with riot gear fired tear gas and struck people who had gathered at the opposition party headquarters to hear a speech by the main opposition leader Nelson Chamisa who still disputes his narrow loss to Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Police officers stand by as opposition party supporters gathered to hear a speech by the country's top opposition leader in Harare, Wednesday, Nov, 20, 2019. Zimbabwean police with riot gear fired tear gas and struck people who had gathered at the opposition party headquarters to hear a speech by the main opposition leader Nelson Chamisa who still disputes his narrow loss to Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Opposition party supporters pick up their belonging after being surrounded by police officers as they waited to hear a speech by the country's top opposition leader in Harare, Wednesday, Nov. 20, 2019. Zimbabwean police with riot gear fired tear gas and struck people who had gathered at the opposition party headquarters to hear a speech by the main opposition leader Nelson Chamisa who still disputes his narrow loss to Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
An opposition party supporter smiles after being arrested by police while gathered to hear a speech by the country's top opposition leader in Harare, Wednesday, Nov. 20, 2019. Zimbabwean police with riot gear fired tear gas and struck people who had gathered at the opposition party headquarters to hear a speech by the main opposition leader Nelson Chamisa who still disputes his narrow loss to Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)